FujiCoin စျေး - အွန်လိုင်း FJC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FujiCoin (FJC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FujiCoin (FJC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FujiCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $235 256.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FujiCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FujiCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FujiCoinFJC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000008FujiCoinFJC သို့ ယူရိုEUR€0.000007FujiCoinFJC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000006FujiCoinFJC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000007FujiCoinFJC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00007FujiCoinFJC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00005FujiCoinFJC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.000175FujiCoinFJC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00003FujiCoinFJC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00001FujiCoinFJC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00001FujiCoinFJC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.000175FujiCoinFJC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00006FujiCoinFJC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00004FujiCoinFJC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.000587FujiCoinFJC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.00132FujiCoinFJC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00001FujiCoinFJC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00001FujiCoinFJC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.000244FujiCoinFJC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00005FujiCoinFJC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.000828FujiCoinFJC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.0093FujiCoinFJC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.00302FujiCoinFJC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.000576FujiCoinFJC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.000217
FujiCoinFJC သို့ BitcoinBTC0.0000000007 FujiCoinFJC သို့ EthereumETH0.00000002 FujiCoinFJC သို့ LitecoinLTC0.0000001 FujiCoinFJC သို့ DigitalCashDASH0.00000008 FujiCoinFJC သို့ MoneroXMR0.00000008 FujiCoinFJC သို့ NxtNXT0.000556 FujiCoinFJC သို့ Ethereum ClassicETC0.000001 FujiCoinFJC သို့ DogecoinDOGE0.00222 FujiCoinFJC သို့ ZCashZEC0.00000008 FujiCoinFJC သို့ BitsharesBTS0.000299 FujiCoinFJC သို့ DigiByteDGB0.000271 FujiCoinFJC သို့ RippleXRP0.00003 FujiCoinFJC သို့ BitcoinDarkBTCD0.0000003 FujiCoinFJC သို့ PeerCoinPPC0.00003 FujiCoinFJC သို့ CraigsCoinCRAIG0.00351 FujiCoinFJC သို့ BitstakeXBS0.000328 FujiCoinFJC သို့ PayCoinXPY0.000134 FujiCoinFJC သို့ ProsperCoinPRC0.000966 FujiCoinFJC သို့ YbCoinYBC0.000000004 FujiCoinFJC သို့ DarkKushDANK0.00247 FujiCoinFJC သို့ GiveCoinGIVE0.0167 FujiCoinFJC သို့ KoboCoinKOBO0.00175 FujiCoinFJC သို့ DarkTokenDT0.000007 FujiCoinFJC သို့ CETUS CoinCETI0.0222
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 08 Aug 2020 23:45:03 +0000.